ch7မဿဲ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch7မဿဲ
7:1 "မဆုံးဖြတ်နဲ့, သငျသညျတရားစီရငျခံရမစေခြင်းငှါဒါ.
7:2 သငျသညျစစ်ကြောစီရင်တော်မူသမျှတရားသဖြင့်စီရင်ကြနှင့်, ဒါကြောင့်သင်စစ်ကြောစီရင်ရကြလိမ့်မည်; သမျှအတိုင်းအတာအားဖြင့်သင်တို့ကိုထွက်တိုင်းတာ, ဒါကြောင့်နောက်ကျောကိုသင်တိုင်းတာခံရကြလိမ့်မည်.
7:3 အဘယ်သို့သင်သည်သင်၏ညီအစ်ကိုမျက်စိထဲမှာခွဲထွက်အဖွဲ့တွေ့နိုင်ပါသည်, နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်မျက်စိထဲမှာဘုတ်အဖွဲ့ကိုမမွငျ?
7:4 သို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏ညီအစ်ကိုအားဆိုနိုင်ပုံကို, '' ငါ့ကိုသင်၏မျက်စိကနေခွဲထွက်အဖွဲ့ယူကြပါစို့,' စဉ်တွင်, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, တစ်ဘုတ်အဖွဲ့သင့်ကိုယ်ပိုင်မျက်စိ၌တည်ရှိ၏?
7:5 အရခွေုံ, ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိကနေဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖယ်ရှား, ပြီးတော့သင့်ရဲ့အစ်ကိုရဲ့မျက်စိကနေခွဲထွက်အဖွဲ့ဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှင်းလင်းစွာအလုံအလောက်မြင်ရပါလိမ့်မည်.
7:6 Do not give what is holy to dogs, and do not cast your pearls before swine, lest perhaps they may trample them under their feet, ပြီးတော့, turning, they may tear you apart.
7:7 မေးပါ, သည်သင်တို့အားပေးတော်မူခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်. ကိုရှာကြလော့, သငျတို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်. ခေါက်, သည်သင်တို့အားဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်.
7:8 တောင်းသောသူလူတိုင်းအတွက်, အားလက်ခံတွေ့ဆုံ; and whoever seeks, တွေ့ရှိချက်; and to anyone who knocks, it will be opened.
7:9 Or what man is there among you, အဘယ်သူသည်, if his son were to ask him for bread, would offer himastone;
7:11 ထို့ကြောင့်, လျှင်သင်, though you are evil, know how to give good gifts to your sons, how much more will your Father, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသူသည်, give good things to those who ask him?
7:12 ထို့ကြောင့်, all things whatsoever that you wish that men would do to you, do so also to them. For this is the law and the prophets.
7:15 မိစ္ဆာပရောဖက်အသတိပြုပါ, သိုးရဲ့အဝတ်အစား၌သင်တို့ထံသို့လာသောသူသည်, ဒါပေမယ့်အတွင်း၌ကျီးတောခွေးဖြစ်ကြ၏.
7:16 သင်သည်သူတို့၏အသီးအပွခွငျးအားဖွငျ့သူတို့ကိုသိကြလိမ့်မည်. စပျစ်သီးအစေ့တို့သည်ဆူးပင်ကနေစုဝေးစေနိုင်ပါတယ်, ဆူးပင်ကနေဒါမှမဟုတ်သင်္ဘောသဖန်းသီး?
7:17 သို့ဖြစ်., ကောင်းသောသစ်ပင်ကောင်းသောအသီးကိုထုတ်လုပ်, နှင့်မကောင်းသောအပင်၏အသီးကိုမကောင်းသောအသီးကိုသီးကိုထုတ်လုပ်.
7:18 A ကောင်းဆုံးသစ်ပင်ကိုမကောင်းသောအသီးကိုသီးနိုင်မဟုတျပါဘူး, တစ်ခုနှင့်မကောင်းသောအပင်၏အသီးကိုကောင်းသောအသီးကိုသီးနိုင်မဟုတျပါဘူး.
7:20 ထို့ကြောင့်, သူတို့၏အသီးအားဖြင့်သင်တို့သူတို့ကိုသိကြပါလိမ့်မယ်.
7:21 အားလုံးမဟုတ်ငါ့အားဆို, 'သခင်, သခင်ဘုရားသည်,'' ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရကြ. အကြင်သူသည်ငါ၏ခမည်းတော်၏အလိုတော်ပါဘူး, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသူသည်, အတူတူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရ.
7:22 အတော်များများကထိုကာလ၌ငါ့ကိုရန်ဟုဆိုလိမ့်မည်, 'သခင်, သခင်ဘုရားသည်, ငါတို့သည်သင်တို့၏နာမကိုအမှီ ပြု. ဟောပြောခဲ့ပါဘူး, သင်၏နာမအတွက်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်, သင်၏နာမအတွက်များစွာသောအစွမ်းထက်ကျင့်ကိုလုပ်ဆောင်?''
7:23 ပြီးတော့သူတို့ကိုငါမှထုတ်ဖော်လိမ့်မယ်: '' ငါသည်သင်တို့ကိုလူသိများဖူးဘူး. ငါ့ထံမ​​ှထွက်သွား, သငျသညျဒုစရိုကျ၏အလုပျသမား။ '
7:24 ထို့ကြောင့်, သတ္တုတွင်း၏ဤစကားကိုကြားသူတို့နှင့်ပညာရှိတစ်ဦးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခံရကြလိမ့်မည်ပါဘူးသောသူမည်သည်, ထိုကျောက်ပေါ်မှာမိမိအိမျဆောကျသော.
7:25 ထိုအခါရွာသွန်းဆင်းသက်တော်မူ, နှင့်ရေကြီးမှုထလျက်,, နှင့်လေတိုက်နှုန်းမှုတ်, ထိုအိမျအပျေါမှာတဟုန်တည်းပြေး, ဒါပေမယ့်မကျခဲ့ဘူး, ထိုသို့ကျောက်ပေါ်မှာတည်ထောင်ခဲ့များအတွက်.
7:26 နှင့်သတ္တုတွင်း၏ဤစကားကိုကြားသူတို့နှင့်မတတ်သောသူအပေါင်းတို့မိုက်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ရကြမည်, ထိုသူသည်သဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သော.
7:27 ထိုအခါရွာသွန်းဆင်းသက်တော်မူ, နှင့်ရေကြီးမှုထလျက်,, နှင့်လေတိုက်နှုန်းမှုတ်, ထိုအိမျအပျေါမှာတဟုန်တည်းပြေး, ထိုသို့ကျဆုံးခြင်းလုပ်ခဲ့တဲ့, အရာနှင့်ကြီးစွာသောပျက်စီးခြင်းသို့ယင်း၏ခဲ့သည်။ "
7:28 ထိုသို့ဖြစ်ပျက်, ယရှေုသညျဤစကားများအားပြီးစီးပြီးမှ, that the crowds were astonished at his doctrine.
7:29 သူကအခွင့်အာဏာရှိသူတစ်ဦးအဖြစ်ကသူတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးဘို့, and not like their scribes and Pharisees.